Isengezo Samavithamini Ezimbuzi
Izimbuzi ziyizilwane ezihlakaniphile futhi zikhululekile ukudla izithombo, ukhula nezinye izinto ezigxilwe ngokujulile, eziqukethe amaminerali amaningi. Izimbuzi zidinga amandla, amaprotheni, amavithamini, amaminerali, inxoza (inqwaba) namanzi, amaprotheni okuyiwona abiza kakhulu. Ukungalingani kwamavithamini namaminerali kunganciphisa ukusebenza kwezilwane futhi kuholele ezinkingeni ezehlukene zezempilo.Inxoza idingeka ukuze ilondoloze impilo yesisu futhi ivimbele ukuphazamiseka kokugaya ukudla, okuyilapho amanzi engumsoco wesondlo oshibhile futhi ngokuvamile enganakwa.
Amavithamini Adingekayo Ezimbuzi
I-Vitamin A inikeza izifo eziphikisanayo nokuntuleka kungabangela ukukhulelwa okuncane, ukukhipha isisu, izifo zamehlo, izinkinga zokuphefumula, kanye nesifo sohudo. Isistimu yokugaya imbuzi iveza u-vitamin A kusuka ku-carotene, ekhona emanzini, izaqathe kanye nokutshala okuluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa ayinakho ekufakeni utshani nokudala.
I-Vitamin D iyadingeka ekumuneni kahle kwe-calcium ne-phosphorus futhi kudingeke ukukhanya kwelanga kuyanele ukuze uthole u-vitamin D. okwanele kungabangela ukukhula okuncane.
I-Vitamin E ibalulekile ekwenzeni ubisi nokukhiqiza. I-Vitamin E itholakele kokudla okuningi, kodwa i-oxidizes ngokushesha ukuze ifani endala kanye nezinhlamvu ezisemhlabathini zibe imithombo empofu. Ukwehluleka kubangela ukuwohloka kwenhliziyo nesisipha samathambo. Imfucumfucu ye-muscle iba sebala futhi ngakho igama elithi 'isifo sofuba esimhlophe'. Lesi simo akunakwenzeka ukuba senzeke emadlelweni noma emadlelweni kanye nezilwane ezingadli kufanele zinikezwe ifani elihle lekhwalithi.
Amavithamini C noK akhona utshani kanye ne-hay. Zingahle zenziwe ngamabhaktheriya ku-rumen (vitamin K) noma esibindi nasezinso (i-vitamin C).
Izimbuzi nezinye izigulane zinama-bacteria ema-rumen azo ahlanganisa amavithamini B kodwa ama-parasite emanzini angasusa amavithamini athile e-B. Ukuntuleka kwamavithamini kungabangela i-cerebrocortical necrosis, isimo esibangela izimpawu zesifo. Lokhu kubangela i-necrosis (efa) yamaseli ku-cortex yobuchopho ngenxa yokungabi nalutho lwe-thiamine (i-vitamin B1).